च्याम्प चितवन २०७५ को उपाधि सेलिसा आचार्य र अभियान पौडेलले हात पारे - Websoft IT Nepal Pvt. Ltd.
Published date : 2018-04-25 Your IP - 3.91.79.74
चितवन : च्याम्प चितवन २०७५ को सेलिसा आचार्य र अभियान पौडेलले हात पारेको छन् ।
गैडाकोटको नारायणी नदी कनिारमा रहेको होटल नारायणी रिर्साेर्टमा फाईनलमा उत्कृष्ट प्रस्तुती दिदै बालिका तर्फ सेलेस्ता आचार्य र बालक तर्फ अभियान पौडेलले उपाधि हात पारेका हुन् ।
उपाधिसगैँ नगद १५/१५ हजार रुपैयाँ, साईकल, ट्रफ्रि र प्रमाणपत्र संयुक्त रुपमा प्रतियोगीतामा फस्ट मिस गुनिभर्स नेपाल २०१७ नग्मा श्रेष्ठ, बरिष्ठ कलाकार रिद्धिचरण श्रेष्ठ, सीनियर फोटोग्राफर राजभाई सुवाल, चलचित्र निर्माता दिपक खाँडसहित प्रतियोगिताकी सञ्चालक लक्ष्मी पन्तले प्रदान गरेका थिए ।
भने बालक तर्फ फष्ट रनर अफमा आर्यन पोख्रेरल र सेकेण्ड रनर अफमा संयोग शर्मा घोषित भएका थिए ।
प्रतियोगितामा ४८ जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै मिस टिनमा अनु र मिस्टर टिनमा आयुषले उपाधी हात पारेका थिए ।
सो अवसरमा टिनका उपाधि विजेतालाई नगद १५/१५ हजार रुपैयाँ, साईकल, ट्रफ्रि र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो ।
यस्तै प्रतियोगिताको टिन तर्फको फष्ट रनर अफमा एपिसा अधिकारी र सेकेण्ड रनर अफमा साहिसा सापकोट घोषित भएकी थिईन् ।
भने मिस्टर तर्फ फष्ट रनर अफमा दिवस अधिकारी र सेकेण्ड रनर अफमा सुशन जोशी घोषित भएका थिए ।
प्रतियोगितामा यस पटक प्रेतियोगीहरुले आफ्नी मम्मीसगैँ डान्स गरेर सबैलाई चकित समेत पारेका थिए ।
विभिन्न नाटकहरुको प्रस्तुती र बालबालिकाहरुमा हुने यौन र्दुव्यवहारको बारेमा कसरी सजग र जानकार हुने भन्ने विषयमा समेत बालबालिकाहरुलाई विशेष प्रशिक्षण गराईएको थियो ।
बालबालिकाहरुको अन्तरनिहित प्रतिभालाई जागरुप गराउन गएको बर्ष देखि यो प्रतियोगिता चितवनमा सुरु भएको थियो ।
होलीडेज क्रियसन होम प्रालिको आयोजनामा भएको प्रतिस्पर्धामा ४८ जना बालवालिकाहरुले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । प्रतिस्पर्धामा बालवालिकाहरुले आ–आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गरि सबै दर्शकहरुलाई चकित पारेका थिए ।
महाभुकम्पको सम्झना अब रोएर हुँदैन । (लिरिकल भिडियो